တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယွမ်ငွေ ၁၄ ဒသမ ၄ သန်းတန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီး ကာကွယ?? - Yangon Media Group
မူဆယ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၉
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ ယွမ်ငွေ ၁၄ ဒသမ ၄ သန်းတန်ဖိုး ရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးကာကွယ် နှိမ်နင်းရေးဆိုင်ရာ အထောက်အ ကူပြုပစ္စည်းများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လွှဲ ပြောင်းပေးအပ်ပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက် ဒေသစံတော်ချိန်နံနက် ၉ နာရီ ခွဲက တရုတ်နိုင်ငံကျယ်ဂေါင်မြို့ရှိ မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံ မူးယစ်ဆေး ဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေး နယ်စပ်ဆက် ဆံရေး BLO ရုံး၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါလှူဒါန်းပွဲတွင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါး ထိန်းချုပ်ရေးကော်မရှင်မှ ဒုတိယအ ထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr.WEI-XTAOJUN က အမှာစကားပြောကြားပြီး လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့် စာချုပ်တွင် နှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူများ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ တရုတ်ယွမ်ငွေ ၁၄ ဒသမ ၄ သန်းတန်ဖိုးရှိ မော် တော်ယာဉ် ၁ဝ စီးမော်တော်ဆိုင်ကယ် ၁ဝ စီးအပါအဝင် မူးယစ်ဆေး ဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေးဆိုင်ရာ အ ထောက်အကူပြုပစ္စည်း ၂၂ မျိုးအား လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါလှူဒါန်းပွဲတွင် တရုတ်နိုင်ငံအမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါး ထိန်ချုပ်ရေးကော်မရှင်မှ ဒုတိယအထွေ ထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr.WEIX TAOJUN ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမူးယစ်ဗဟိုအဖွဲ့ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ တပ်ဖွဲ့မှူးယာယီရဲမှူးချုပ် မြင့်အောင် ဦးဆောင်သောမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ တက်ရောက် ကြကြောင်းသိရသည်။
ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် လက်ယက် ရေနံတွင်းများမှ ကောက်ယူခဲ့သော ငွေကြေးဖြင့် တိုက်နယ်ဆေးရုံမျ??